Kooxda DAACISH oo Nolosha ku Gubtay Duuliye u dhashay Dalka Urdun - Somaliland Post
Home News Kooxda DAACISH oo Nolosha ku Gubtay Duuliye u dhashay Dalka Urdun
Kooxda DAACISH oo Nolosha ku Gubtay Duuliye u dhashay Dalka Urdun
Amman (SLpost)- Kooxda ISIS ee ka talisa Qaybo ka tirsan dalalka Suuriya iyo Ciraaq, ayaa nolosha ku gubay Duuliye Diyaaradeed oo u dhashay dalka Urdun, kaas oo gacanooda ku jiray dhowrkii todobaad ee u dambeeyey.
Duuliyahan oo magaciisa la odhan jiray Moaz al-Kasasbeh, ayaa watay diyaarad ka mid ah diyaaraha Isbaahaysiga Maraykanku hoggaaminayo ee dagaalka kula jira Kooxda ISIS, kuwaas oo waddanka Jordan iyo dalalka kale oo Carbeed ku jiraan, waxaanu kooxda ISIS u gacan-galay bilowgii December ee sannadkii hore kaddib markii diyaaraddii uu watay kula dhacday deegaan ka tirsan dhulka ay kooxdaasi ka taliso.
Muuqaal Video ah oo Kooxda ISIS ku baahisay baraha Internetka, waxa lagu arkayey Duuliiyaha oo lagu xidhay Qafas shabaq ka samaysan, dabadeedn isaga oo nool dab la qabadsiiyey.
Warkan oo caawa Fiidkii laga baahiyey Telefishannada dalka Urdun, waxa lagu sheegay in Duuliye Kasasbeh oo 26-jir ah ay kooxda ISIS dishay bil ka hor, balse immika la baahiyey muuqaalka dilkiisa, kaddib markii sida la sheegay uu fashilmay shuruud ay kooxda ISIS uga dhigtay sii-deyntiisa in dawladda Urdun ay xabsiga ka sii deyso haweenay u dhalatay dalka Ciraaq oo magaalada Caasimadda ee Amman ka fulisay qaraxyo dad badani ku dhinteen, taas oo dawladda Urdun oo dedaal dheeraad u gashay samato-bixinta duuliyaha ay ka dhega-adaygtay in la sii daayo haweenaydaas oo lagu magacaabo Sajida al-Rishawi.
Boqolaal shacabka ku dhaqan magaalada Amman ee caasimadda Urdun, ayaa markii warkani soo baxay isugu baxay shaaracyada magaaladaas, iyada oo dalbanayey in laga aar-goosto cidda dishay Duuliyaha oo dhalasho ahaan ka soo jeeda mid ka mid ah qabiillada ugu tunka weyn Haashimiinta dalka Urdun, kuwaas oo taageersan boqortooyada dalkaas.
Boqorka dalka Urdun, Boor Cabdalle, ayaa ku tilmaamay duuliyaha geesi u dhintay dalkiisa iyo waxa uu rumaysan yahay, waxaanu shacabka dalkiisa ku boorriyey inay u midoobaan cadowgooda oo uu ku tilmaamay inay yihiin kooxda ISIS.
Dalka Urdun oo ka mid isbahaysiga Maraykanku hoggaamiyo ee duqeynta dhinaca Cirka ah ku haysa kooxda ISIS, ayaa ku hawlanayd badbaadinta Korneyd Kasasbeh, iyaga oo sheegay inay dhaafsanayaan haweenay u dhalatay dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Sajida al-Rishawi, taas oo sannadkii 2005-tii loo qabtay Qaraxyo dad badani ku dhinteen oo lala beegsaday Hotel ku yaala magaalad Ammaan ee dalka Urdun.